Ukukhiqizwa Kwesikhwama Sokuthenga saseChina esenziwe ngefolda | Eqondile
Isikhwama sokuthenga esigoqekayo senziwe nge-polyester, eqinile, eqinile futhi engasindi futhi okulula ukuyihlanza futhi iqine. Futhi ayinamanzi, ngakho-ke akufanele ukhathazeke ngamanzi noma isobho lokungcolisa izikhwama. Lesi sikhwama esikhanyayo esingasindi nesitayela sehembe sisingatha indawo enhle yezikhwama zokudla zepulasitiki. Lesi sikhwama sokudla esigoqekayo esigoqekayo sigoqwa sibe yisikhwama sakho se-inter, futhi sikwenze kube kuhle ukuphatha nawe nomaphi lapho uya khona. Ungafaka i-logo yakho uqobo ngaphambili kwesikhangiso sokukhangisa esiyingqayizivele nesimfashini. Uma unombono wokudala, sicela usitshele, singakusiza ukuwuqedela.
Kunezizathu eziningi zokuthi kungani abantu bengathanda ukusebenzisa isikhwama sokuthenga esigoqekayo kunokusebenzisa isikhwama sepulasitiki sendabuko. Isici esingeziwe senza izikhwama kube lula ukuziphatha nokuzisebenzisa. Inhloso yesikhwama esivulekile esisebenzisekayo sokuthenga kufanele sisebenze, futhi futhi kungaqinisekisa ukuphepha kokuthenga. Uma kuqhathaniswa nezinye izikhwama zokuthenga ezijwayelekile, isikhwama esithenga kabusha sokuthenga esinokuphinda sinikeze izinzuzo eziningi ze-pragmatic.
Lolu hlobo lwesikhwama esikhwamayo esigoqekayo senziwe nge-polyester, futhi singenziwa nangokotini, nonwoven, oxford. Lokhu kukuvumela ukuthi udlulise kalula izikhwama zakho ngokungahambi kahle, ngaphandle kwesisindo. Njengamanje, isikhwama sepulasitiki sizokwandisa izindleko zamakhasimende esitolo, kuthi isikhwama sephepha nesikhwama esisebenzisekayo sizongena esikhundleni sepulasitiki. Ngakho-ke isikhwama sokuthenga esisongekayo esisongekayo senza ukubandakanyeka okuningi. Isikhwama esivumelekile esivuselelekayo esingasetshenziswa singasetshenziswa cishe izikhathi ezingama-500. Isikhwama sokuthenga esigoqekayo singasetshenziswa iminyaka eminingi, ngakho-ke kungamathuluzi amahle wokuphromotha, ngakho-ke amakhasimende azophatha isikhwama sakho sokuthenga futhi akhiphe izwi ngomyalezo wenkampani yakho iminyaka eminingi.
Nansi impendulo evela kumakhasimende ethu: “Ngihlala ngikhohlwa izikhwama zami ezingaphinde zisebenze esiqwini semoto yami lapho ngiya ezitolo.
Izinto Okungeluki / polyester / inkambiso
Usayizi Usayizi ojwayelekile noma inkambiso
Langaphambilini Mesh Laundry Bag
Olandelayo: Isikhwama Sokuthenga seJute
Isikhwama Sokuthenga Esigoqekayo Esisebenzekayo
Isikhwama Sokuthenga Esigoqekayo Sisebenza kabusha
Ukugoqa Isikhwama Sokuthenga
Isikhwama Sokuthenga sePolyester
Isikhwama Sokuthenga Esisebenza Ngokuphinda Sisebenziseke
Isikhwama Sokuthenga Esiphezulu
Isikhwama Sokuthenga Ukugoqwa
Isikhwama Sokuthenga Inayiloni
I-Polyester Yesikhwama Sokuthenga
Isitolo Cooler Bag
Ukuthenga Isikhwama Esigoqekayo